Movistar Plus yave kuwanikwa muFirefox uye Chrome pasina kuwedzera | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zvakavatorera, asi zvave kutoita. Pakatangwa Movistar Yomvi makore mapfumbamwe apfuura, yakaita sevamwe vese: funga chete nezvevashandisi veWindows. Naizvozvo, zvaida software yakadai seSilverlight, izvo zvaiita kuti zvishande chete muInternet Explorer zviri pamutemo kana muSafari nekuisa iyo plug-in. Kuwedzerwa kwakakurumidza kuburitswa kwakaita kuti zvishande paChannel, asi vashandisi veFirefox vaisakwanisa kuwana sevhisi. Mwedzi mishoma yapfuura vakaunza shanduko, Saka zvino isu tatova kuona Movistar Plus muFirefox pasina kuedza chero hunyengeri kana kupenga.
Izvo zvakagadziridzwa, uye zvakashaikwa. Zvino zvakare inoshanda mu Chrome isina kuwedzerwa kwambotaurwa, uye shanduko dzave dzakadzama zvekuti hazvishande chete pamabhurawuza edesktop, asiwo nharembozha, kusanganisira yakanyanya kubvumidzwa, iOS Safari. Chinhu chega chinodiwa muFirefox kumisikidza mukana wekutamba zvemukati zve DRM, chimwe chinhu chatinenge tatoita kana tikashandisa Spotify kana chero imwe sevhisi inoburitsa zvirimo zvine kodzero. Izvi hazvidiwe muChannel.
Movistar + Lite yemahara mwedzi mumwe kune wese munhu nekuda kweCoronavirus, saka unogona zvakare kunakidzwa paLinux
Movistar Plus haichashandi
Pawebhu pavanotitaurira nezve mukana uyu, unobva muna Chikunguru apfuura, vanoratidza mufananidzo uine zvishoma zvinodiwa, asi hazvishande. Mariri ivo vanongotaura nezve Windows uye macOS uye ivo vanoramba vachitaura nezvekuwedzera kweChannel kana Edge, asi izvi hazvichisiri izvo. Ndizvo chete bhurawuza inokwanisa kutamba zvirimo zvakachengetedzwa inodiwa, zvisinei nehurongwa hwekushandisa hwatiri kushandisa. Wakatarisa muFirefox, Chrome (isina kuwedzerwa), Safari yeIOS (mu macOS yakatoshanda kare) uye muVivaldi. Inoshanda mune dzese, uye inoenderana neFoto-mu-Mufananidzo muFirefox neSafari, kuti tikwanise kuona nzira, mabhaisikopo uye akateedzana muhwindo rinotenderera kana tikashandisa imwe yeaya mabhurawuza. Mu Chrome isu tinogona zvakare kuzviita nekuwedzera senge Mufananidzo muBhatani reMifananidzo.
Kana zviri zvemabasa, mumabhurawuza ese tinogona kuburitsa zvirimo uye tine maawa maviri ekuti tiberekane nenzira dzenhema, asi hatigone kurekodha. Ngazvive sezvazvingaite, inyaya dzakanaka kuti yatove kuwanikwa muFirefox, inova Izvo zvichatibvumidza isu kunakidzwa neMovistar Plus pasina matambudziko mune zvishandiso senge iyo PineTab (kana zvese zvikagadziriswa) kana Raspberry Pi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Isu tava kuona Movistar Plus kubva kuFirefox kana Chrome pasina kuwedzerwa
WIDZIMAI (drm) Ndiro dambudziko
Uye muManjaro vakandiudza kuti google haidi kuiburitsa ye linux aarch64.
Zvekuti mune edu pinetabs iwe unogona kunakirwa zvemukati ne DRM zvakanyanya kwazvo mudenga.
Uye ini handifunge zvimwe zvemukati-zvisina DRM zvemukati zviri kudyiwa muhuwandu hwakadai kunetsekana avo vanozvishandisa. Asi zvinogona kuitika kuti zvimwe zvakapurwa.
MuManjaro, ndinayo muGNOME Mabhokisi uye pane USB (xfce-usb) uye inoita. Ndakaedza Movistar +, Apple Music uye Spotify, uye vese vari vatatu vanoenda. Hongu ichokwadi, uye handizive kana ichifanira kuita nekuti muchina chaiwo (muUSB handina kuucherekedza), izvo zvinotora nguva yakareba kuti "uzive" kuti ine DRM yakaitwa uye kana iwe ukananga , inokundikana, asi nguva pfupi gare gare inobereka zvese. Izvo zvandisingade mamwe mapeji, uye izvo zvinowanzoitika uye zvinoshungurudza, nekuti ndanga ndichiedza izvo kwechinguva uye ndanga ndichifunga kutora kusvetuka kubva Kubuntu.
Uye ini ndinofunga kuti muPineTab ini ndaonawo imwe DRM, asi ikozvino handizive kana mune imwe webhusaiti kana mune ipi system (ini ndiri kuyedza 4).
NTP NTPsec 1.2.0 uye Chrony 4.0 inosvika nerutsigiro rweiyo yakachengeteka NTS protocol